Q.Midoobe Oo Xaqiijisay in Diyaaradaha isbaheysiga NATO Ay Afghanistan Ku Xasuuqeen Carruur.
Saturday September 29, 2018 - 09:04:12 in Wararka by
Ciidamada isbaheysiga NATO ayaa gummaad joogta ah ku haya shacabka Rayidka ah ee ku dhaqan gobollada kala duwan ee wadanka Afghanistan.
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan 21 ruux oo shacab ah lagu dilay duqeymo kala duwan oo saacadihii la soo dhaafay ay diyaaradhaha Mareykanka iyo kuwa xukuumada Kaabul ay ka geysteen qeybo ka mid ah wadankaas dadka ugu badan ee ku dhintay duqeyntaas ayaa ah carruur da'yar.
Hay'ado maxalli iyo kuwa caalami ah oo ka howlgala wadanka ayaa sheegay in dadka lagu dilay duqeymahaas ay ku jiraan 12 ruux oo isku qoys ah.
Duqeymahan ayaa ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Meydaan Wardak, halkaas oo ay maalmahan howlgallo military ka wadeen ciidamada xukuumadda iyo kuwa NATO.
Ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Afghanistan ayaa sheegay in duqeymaha ay ku beegsadeen dagaalyahano ka tirsan Imaarada Islaamiga Afghanistan balse warbaahinnada gudaha oo soo xiganaya dadka deegaanka ayaa sheegaya in duqeyntu ay si wuxuushnimo ah u beegsatay dadka rayadka ah.
War ka soo baxay xafiiska QM ee Kabul ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in duqeyntaas lagu dilay in ka badan 20 ruux oo rayid ah oo u badan carruur,
Warbaahinada ayaa sidoo kale sheegaya in carruurta lagu dilay duqeyntaas ay gaarayaan ilaa 14, islamarkaana ay da'dooda u dhexeyso 6 - illaa 14 sano jir.
Warbaahinadu waxay sheegayaan in aysan illaa hadda kala caddeyn in duqeynta ay fuliyeen ciidamada gaalada Mareykanka, iyo haddii ay fuliyeen kuwa murtadiinta oo qudhooda adeegsada diyaaradaha dagaalka, balse waxaa la aaminsan yahay dhowrkii todobaad ee ugu dambeeyey ay labada ciidanba halkaas ka wadeen howlgalo wada jir ah oo ay fulinayeen ciidamo lug ah iyo diyaarado dagaal intaba.
Gumaadkan wuxuushnimo ayaa imaanaya iyadoo sabtidii la soo dhaafay sagaal ruux oo isku qoys ah lagu dilay duqeymo diyaaradeed oo uu cadowgu ka geystay gobolka Kapisa, taas oo lagu dhuftay guri uu daganaa macalin caan ah oo laga yaqaano deegaanka.
Duqeymaha xagga cirka ah ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa ku soo kordhay dalka Afghanistan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Lixdii bil ee ugu horeysay sanadkan 2018, waxaa duqeymaha bahalnimo ee Mareykanka iyo xukuumada ridada lagu dilay ugu yaraan 149 ruux, waxaana lagu dhaawacay in ka badan 200 oo kale, taas oo ah mid aad u badan marka loo barbar dhigo sanadkii hore ee 2017ka.
Duqeyntii ugu xumeyd ee sanadkan dhacda waxay ahayd duqeyn lagu qaaday gobolka Khunduz bishii April ee sanadkan, taas oo lagu beegsaday xaflad qalin jabin ah oo abaalmarino lagu gudoonsiinayey arday dhameystay qur'aanka kariimka, waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan 107 ruux oo u badnaa caruurtii madarasada.
Macluumaad laga helay ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa sheegaya in bishii July ee sanadkan ay dalka Afghanistan u rareen 746 gantaal oo hub kala duwan ah, taas oo lagu katilmaamay tiradii ugu badneyd tan iyo sanadkii 2010i, marka loo barbar dhigo tiro-koobka hubka bil waliba loo diro wadanka Afgaanistaan.
Tirada hubkii bishii July ee sanadkan loo daabulay Afghanistan ayaa ku laba jibaarma tiradii bishii July ee 2017-kii, bil ka hor inta uusan madaxweynaha wadanka Mareykanka, Donald Trump ku dhawaaqin Istaraatiijiyad cusub ee uu sheegay inuu kula dagaalamayo Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Dowladda Iran oo soo ridday diyaarad Drone ah oo Mareykanku leeyahay iyo Washington oo Xaqiijisay,
Wasaaradda Waxbarashada Oo Xaqiijisay in laxaday Imtixaanaadkii Dugsiyada Sare.
Diyaaradaha Mareykanka oo dad shacab ah ku duqeeyay deegaanka Farsooleey ee Gobolka Sh/Hoose.
11 Shacab Ah oo ku Shahiiday duqeymo ay diyaaradaha Yahuudda ka geysteen Magaalada Qaza.